एमाले र जसपाको साइज कत्रो रहला ? आज अन्तिम फैसला - Media Dabali
एमाले र जसपाको साइज कत्रो रहला ? आज अन्तिम फैसला
काठमाडौं - पार्टी विभाजनपछि एमाले र जसपाको साइज कत्रो हुने भन्ने आज देखिने भएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ अध्यादेश आएपछि विभाजित भएका एमाले र जसपाका जनप्रतिनिधिले दल रोजी सक्नुपर्ने समयावधि आज सकिँदैछ ।
निर्वाचन आयोगले ती दलबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई २२ भदौसम्मको समयावधि दिएको थियो । जसअनुसार जिल्ला जिल्लामा एमालेबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाबाट लोसपा रोज्ने क्रम चलिरहेको छ ।
सातवटै प्रदेशका प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले धमाधम विभाजित पार्टी रोजिरहेका छन् । माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीमा प्रदेशमा पनि २२ प्रतिशत जनप्रतिनिधि पुगेको दाबी गरिएको छ । प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त एकीकृत समाजवादी एमालेभन्दा ठूलो दल बनिसकेको छ ।
२० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भएमा दल विभाजन गर्न मिल्ने गरी सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले २ भदौमा जारी गरेपछि एमाले र जसपा विभाजन भएका थिए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आजदेखि आ–आफ्ना दलमा सामेल हुने भएका छन् । हिजोसम्म एमाले विभाजन भएको होइन, चोइटिएको मात्र हो भन्ने एमालेका केपी ओली पक्षका नेताहरूले आज आउने परिणामपछि पार्टीको साइज बल्ल थाहा पाउने भएका छन् ।
संविधान दिवसमा जसपाले गर्याे उल्टाे निर्णय, देश हल्लाउनसक्ने संकेत
ओलीका विषयमा जसपाका अध्यक्षले गरे गम्भीर खुलासा
जसपाको संघीय परिषद अध्यक्ष बने डा. बाबुराम भट्टराई
जसपाले उठयो गम्भीर कदम, ओली सरकारको खेल खतम !
बिहिवार, मंसिर ४ २०७७०६:५४:१५
# जसपा # बाबुराम भट्टराई